poem for afftected children during Nargis
Subject: poem for afftected children during Nargis Tue Jun 17, 2008 2:02 am
မေလက မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများမှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ အကျဉ်းတန် Nargis မုန်တိုင်းဒဏ်ကို အလူး အလဲ ခံလိုက်ရရှာတဲ့ စိတ်ရောလူပါ မောဟိုက်နွမ်းလျနေတဲ့ ရိုးသားဖြူစင်လှတဲ့ ကလေးငယ်များရဲ့ ဘ၀စာမျက်နှာများကို သနားစာနာမှုများစွာနဲ့ ဒီကဗျာလေးကို ရေးစပ်မိလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
•	တစ္ဆေခြောက် အိပ်ပျက်ည
•	ကြမ္မာဖန်ရာ လောကကမ္ဘာထဲ
•	အကျဉ်းတန် ခရောင်းလမ်းဝန်းကျင်မှာ
Nypian တစ်ဦးတစ်ယောက်စီတိုင်းလည်း ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ တစ်ခုခုကို စဉ်းစားပေးပါ။ သူတို့လေးတွေအတွက် မိမိတို့လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေ ဘာများရှိပါသလဲလို့။ သူတို့လေးတွေ အတွက် တစ်ခုခုလုပ်ဆောင် ပေးလိုက်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့.. သူတို့ ရဲ့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် ဘ၀စာမျက်နှာများ သာယာချိုမြိန် ဖြောင့်ဖြူးဖို့အတွက် အတူတစ်ကွ တောင်းဆုကိုယ်ဆီ ပြုကြပါစို့။
Subject: Re: poem for afftected children during Nargis Sun Jun 22, 2008 2:56 am
Thanks For Sharing. That's fantastic since it's poem
Btw, I moved this Topic to Art of Nypians.
Subject: Re: poem for afftected children during Nargis Sun Jun 22, 2008 3:14 am
ဧရာမြေမှ စာအံသံ - <ကိုမင်းတစေ>
မူရင်း ဘလောလ့်ပိုစ်ကို ဖတ်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်http://a-paw-sar-myar.blogspot.com
Subject: Re: poem for afftected children during Nargis